Linux ကို – တေလာ Lopes ツဘလော့
2 သြဂုတ်လ 2016 တေလာ Lopes	ubuntu 16, ကွက်လပ်, ခလုတ်မပါဘဲစည်းလုံးညီညွတ်ရေး, ဗလာစည်းလုံးမှု	မှတ်ချက် Leave
တစ်ဦးကလှောင်အိမ် (သို့မဟုတ်လှောင်အိမ်) ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုအထီးကျန်ပတ်ဝန်းကျင် Debian ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုမယ့် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဆိတ်ကွယ်ရာကိုမူရင်းကနေ. ကျွန်တော်စမ်းသပ်ချင်တဲ့အခါဒီအသုံးဝင်သည်, လုံခြုံစွာ, ကုဒ်ကိုင်တွယ်, packages များ, နှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုများ.
13 ဧပြီလ 2013 တေလာ Lopes	chroot, debootstrap, debian လှောင်အိမ်, လှောငျအိမျ, debian လှောင်အိမ်, linux ကိုလှောင်အိမ်	မှတ်ချက် Leave
ဆုံးမအောင်မြင်ခြင်း “ရနိုင်ပါသလားမဟုတ် Stat / dev / sdb1” အတူချောင်းကိုပုံစံ “mkfs”
Debian Boot တက်နှင့်အတူတစ်ဦးကို USB ချောင်းကို mount မှ, ငါပိုင်ခြား (fdisk) နှင့်ပုံစံ (mkfs), ငါမူကားပြဿနာများရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ် (သတိပေး command ကိုဖတ်ရှုခြင်းမပြုဘို့).
11 မတ်လ 2013 တေလာ Lopes	mkfs.ext2	မှတ်ချက် Leave
Instalar Firefox ကိုအဘယ်သူမျှမ Debian
Mozilla Firefox ကိုမှတဆင့် Installing “apt-get” အဘယ်သူမျှမ Debian ဖြစ်ညှစ်, တွင်4ခြေလှမ်းများ. အကျင့်ကိုကျင့်!
4 မတ်လ 2013 တေလာ Lopes	debian ညှစ်, debian ff, firefox ကို debian, firefox ကို instalar	မှတ်ချက် Leave
linux ကိုအတွက်ကွန်ယက်ကိုကဒ်ကိုအစားထိုး | debian
အဆိုပါ Debian server ကို NIC ကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်အစားထိုးခံရရန်လိုအပ်သည်, သို့သော်, သို့ “တုတ်” အသစ်ကကဒ်, ဘာမျှမတွေ့ရှိခဲ့သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြု. အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့?
18 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	debian, ifconfig, Linux ကို, lspci, modprobe, NIC	13 မှတ်ချက်များ
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.479.824 ဝင်ရောက်ခွင့်